२०७७ पौष १७ शुक्रबार १४:०७:००
महामहिम श्रीमती प्रतिभा राणा !
जापानका लागि नेपालको राजदूतावास, टोकियो
आज म तपाईंलाई सम्झँदै छु । हुनत, धेरैले बिर्सिसकेका होलान् तर मैले बिर्सेको छैन । मजस्तै तपाईंलाई अरूले पनि संझेका होलान् । तपाईंको आफ्नै पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बिर्से पनि नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र नेताले कसरी बिर्सेलान् र ?
तपाईंलाई आफू नेपालको राजदूत भएको थाहा नहुने त कुरै भएन । यसैले देश अहिले अत्यन्तै जटिल मोडमा रहेको, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूको झगडाले देश भड्खालामा जाकिएको छ दुई तिहाइ बहुमतबाट मैमत्त दम्भी सरकार एकैचोटि पातालमा भासिएको पनि अवगतै हुनुपर्छ । नेपालको भविष्य अब के होला ? कसो होला ? देश कुन गन्तव्यमा जाला ? नेतृत्व कता जाला र कसले गर्ला भन्ने कौतुहल व्याप्त छ । देशभित्र मडारिएको कालो बादलको परिदृश्यसँग तपाईंको कुनै लेनादेना छैन भन्ने धेरैले ठानेको हुनुपर्छ । कुरो सही पनि हो । तर, यो कालो बादल हटाउन तपाईंको सानो त्यागले काम गर्ला कि जस्तो लागेरै यो पत्र लेख्दैछु ।
महामहिम राणा, धेरै नेपालीलाई तपाईंको परिचय थाहै छ । र, पनि म यसमा केही थप गर्न चाहन्छु । तपाईंको आफ्नै राजनीतिक र सामाजिक परिचय छ तर नेपाली समाजले तपाईंलाई त्यस हिसाबले चिन्दैन । नेपाली समाजले त तपाईंलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी ‘सासु’ भनेरमात्र चिन्दोरहेछ । तपाईं राप्रपाकी नेतृ हुनुहुन्छ, विगतमा तपाईंले मन्त्री बन्ने सौभाग्य पनि प्राप्त गरिसक्नुभएको हो । सामाजिक नेतृत्व तथा समाज सेवामा लामो समय बिताएकी तपाईं करिब चार वर्षदेखि नेपालको तर्फबाट जापानको राजदूत पदमा आसीन हुनुहुन्छ । राजनीतिक समीकरण र सत्ताको पद बाँडफाँटमा तपाईंलाई यो पद आइलागेको र तपाईंको इच्छा र भावनाविपरीत ‘हुन्छ त नि’ भनेर चित्त बुझाउन र मान राखिदिन नै तपाईँले यो पद स्वीकार गर्नुभएको होला भन्ने मेरो अनुमान छ । अधिकांश राजदूत पार्टीका कार्यकर्ताका रुपमा जागिर खाइरहेका छन् । त्यस्ता जागिरेहरुबाट तत् तत् देशसँग नेपालको सम्बन्ध मजबुत भएको छ, आपसी मित्रतामा बढोत्तरी आएको छ भनेर मान्न सकिने आधार छैन । यी त पार्टीले पठाएका गोठालामात्र भए । तपाईँ पनि भिन्न हुनुभएन । सबै राजनीतिज्ञसँग कूटनीतिको सामान्य भाषा, यसका सीमा र आपसी सम्बन्धका बहुआयामिक विषयका बारेमा जानकारी नहुन सक्छ । त्यसैले राजनीति र कूटनीति दुई भिन्न नीति हुन् । राजनीति जानेको मान्छे कूटनीतिमा पनि सफल हुन्छ भन्न सकिँदैन तर कूटनीति जानेको मान्छे भने राजनीतिमा सफल पनि भइरहेको देखिएको छ ।
तपाईँ घरानियाँ राणा खानदानकी बुहारी ! त्यस्तो परिवारबाट बाहिर निस्केर राजनीतिमा हाम्फाल्नु पनि ठूलै संयोग हो । राजनीतिमा लागेको कारणले नै तपाईँ राजदूत हुनुभएको हो तर राजदूत पदमा टिकिरहन तपाईँको ज्वाइँको योगदान छैन भन्दा कसैले पनि विश्वास गर्दैन । मानिसहरु त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देउवाकी सासू भएकै कारणले कांग्रेसले सडक र सदनमा चर्को विरोध नगरोस् भनेर तपाईँलाई राजदूत पदमा टिकाइ राखेका हुन् पनि भन्छन् । यो आरोप सत्यको नजिक रहेको सन्देह नेकपाको सरकार गठन यता नेपाली कांग्रेसले अवलम्बन गरेको मौन विरोधको नीतिबाट पुष्टि पनि हुन्छ । देशमा यति हदसम्मको वितण्डा हुँदा पनि कांग्रेस यसरी बस्न सक्नु अर्थात् प्रमुख विपक्षी दलको भूमिका यसरी निस्तेज र अशक्त पार्ने तपाईँकै राजदूत पद हो भन्नेहरु पनि छन् । हुनत यी सबैको कारण तपाईँको राजदूत पदमात्रै नहोला तर तपाईँ पनि एउटा कारक भने पक्कै हो ।
राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्र तपाईँले अनुभव गर्नुभएको क्षेत्र हो । तपाईँको देशव्यापी सञ्जाल छन् । राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तपाईँको पहुँच र पहिचान छ । तर, जब तपाईँ टोकियोमा आफ्ना ऊर्जाहरु बिसाएर राजसी ठाँटले बस्न थाल्नुभयो त्यसले नेपालको राजनीतिमा ठूलो प्रभाव र असर परेको छ । अरु थुप्रै देशका राजदूतहरुको अदली बदली भयो । कतिपयले राजीनामै पनि दिए तर तपाईँँ ज्वाइँको नासोस्वरुप प्राप्ते पदमा टाँसिइरहनुभएको छ ।
तपाईँ अब राजीनामा दिनुस् । उमेरले पनि तपाईँ अब वानप्रस्थको वयमा हुनुहुन्छ । यो उमेरमा तपाईँ स्वदेशमै, आफ्नो घर परिवार समीपमा बस्नुस् । आफूले प्राप्त गरेका सीप र ज्ञानबाट यहाँकै माटो सिञ्चन गर्नुहोस् ।
देशले फेरि एकपटक नेपाली कांग्रेसमाथि अहिलेको दुर्दशाको जटिलतम मोड पार लगाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी सुम्पन लागेको छ । तपाईँँको पद लोलुपताले नेपाली काग्रेसले जनताका पक्षमा उठाउनुपर्ने विषयमा समेत मुख बन्द गरेरजस्तो देखिएको छ । अहिले नेपाली कांग्रेसको मुख बन्द हुनु भनेको प्रजातन्त्रको मुख बन्द हुनु हो । प्रजातन्त्रको मुख बन्द हुँदा लामो संघर्षबाट प्राप्त संविधानमाथि हमला भएको छ । त्यसैले आफ्नो, आफ्ना छोरीज्वाइँको, यो समाजको, नेपाली कांग्रेसको र समग्र राष्ट्रकै प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका लागि पनि राजीनामा दिएर नेपाल फर्कनुपर्छ । (बोस्टन, अमेरिका ।)